Sistemụ arụmọrụ ụgbọ ala gam akporo 8.0 maka Regal China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > Sistemụ arụmọrụ ụgbọ ala gam akporo 8.0 maka Regal
1. Nkwado nkwanye ụkwụ wiil dị njikere, ijiri egwu gị n'enweghị nsogbu. Site na ọrụ ndị a, ị nwere ike ilekwasị anya ozugbo n'ihu, nke ga - eme ka ịkwọ ụgbọala dị nchebe, sistemụ ụda ụgbọ ala gam akporo 8.0 maka Regal , na-akwado Bluetooth-nyeere, GPS wuru na, CD Player, MP3.
2.Built-in GPS sistemụ sistemụ, na-akwado TOMTOM, IGO8, ROUTE66, NAVITEL etc.Our Android 8.0 sistemụ ụda igwe maka Regal debere ụlọ ọrụ redio iri atọ. Wuru n'ime igwe AM / FM. Ihe sistemụ ụgbọ ala gam akporo 8.0 nke Regal na-eji modul redio kachasị mma iji hụ na ndị ahịa niile nwere ahụmịhe kachasị mma.
3.Mgbe sistemụ igwe eji arụ ọrụ ụgbọ ala nke ekwentị 8.0 nke Regal na-abịa na-arụ ọrụ na nha nha-eze na arụ ọrụ akwụkwọ ozi. Nwere ike megharịa akwụkwọ ekwentị gị na ekwentị gị na stereo ụgbọ ala wee mezie aka gị n'efu. Ọzọkwa ị nwere ike ịnụ ụtọ egwu egwu na-enweghị egwu sitere na sistemụ igwe egwu vidiyo ụgbọ ala gị 8.0 maka Regal.
4. Kwado atụmatụ ejikọtara ngwa ngwa: Android 8.0 sistemụ ụgbọ ala maka Regal Dakọtara na tebụl android na ngwaọrụ, njirimara dị mfe na-eme ka njikwa ọnụ dị n'etiti smartphone na isi ụgbọ ala gị. Nwere ike ijikọ ma mekọrịta smartphone gị na uni site na USB, na-enweghị sọftụwia ọzọ a chọrọ.
Sistemụ Multimedia gam akporo nke Suzuki Crossover Kpọtụrụ ugbu a
7inch Deckless Universal gam akporo Multimedia Sistem Kpọtụrụ ugbu a
FIT JAZZ 2014 Car DVD ọkpụkpọ Kpọtụrụ ugbu a
redio ụgbọ ala maka CITY 2014 Kpọtụrụ ugbu a